Dalka Sudan oo ugu baaqay dalalka dariska ah inay iska dayaan damacooga dhulka Sudan - Horn Future
Dalka Sudan oo ugu baaqay dalalka dariska ah inay iska dayaan damacooga dhulka Sudan
Khartoum (Horn Future)-Madaxtooyada dalka Sudan ayaa ugu baaqday dalalka dariska ah ee ay ku muransan dhulka soohdimaha kuyaala inay iska dayaan waxa ay ku tilmaamtay Khartoum damacooga dhulka Sudan sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi.
Kaaliyaha madaxweynaha Sudan Muusa Maxamed Axmed ayaa sheegay in doorashada xalka siyaasadeed, iyada oo loo marayo wadahadalo iyo garsoor caalami ah ay noqon doonto aragtida dalkiisu ee ku saabsan arrimaha is-diidada u dhaxeeysa Koonfurta Sudan iyo kuwa kale.
Waxa kaliyaha madaxweyne Cumar al-Bashir uu sheegay in dalkiisu ku dhagan yahay xuquuqdiisa buuxda ee ah xal siyaasadeed si loo xalliyo muranka ka dhaxeeya Masar ee ku saabsan deegaanka sadexgeesoodka Xalaayib iyo Shalatiin iyada oo loo marayo heshiisiin caalami ah,waxana uu xaqiijiyay in Sudan aynan gorgortan galin doonin arrimaha madaxbanaanida.
Masuulkan ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan is-faham ka dhaxeeya dalka dariska ah ee Ethiopia ee ku saabsan gobolka “Al-fashaga” oo ay gaadheen natiijooyin wanaagsan,isaga oo beeniyay jiritaanka wax damac ah oo Sudan ay ka leedahay soohdimaha dariskeega.
Waxa inta badan ay ku sugan yihiin calaamadayn la’aan soohdimaha Sudan ay la wadaagto dalalka dariska ah ee kala ah (Ethiopia, Libya, Central Africa iyo Masar), kuwaas oo gaadhaya ku dhawaad 6834 kilo-mitir, waxaanan ahayn soohdinta Sudan ay la leedahay dalka Chad oo la calaamadeeyay marka laga reebo qayb yar oo kooban.
Waxa xilliyadii la soo dhaafay dhacay xiisado dhexmaray xidhiidhka ka dhaxeeya Masar iyo Sudan iyo hadalo aflagaado ah oo dhexmaray warbaahinta labada dhinac,kuwaas oo salka ku haya muranka arrimo dhowr ah, oo uu ku jiro muranka soohdinta sadexgooseedka Xalaayib.
Waxa hadda ka hor madaxweynaha Sudan Cumar al-Bashir iyo raysal wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ay u xil-saareen bishii November 2014 wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sudan iyo Ethiopia inay soo go’aamiyaan xilliyo go’an si loo sii wado hawlaha caalamadaynta ah ee soohdinta.
Waxa sido kale hakad galay calaamadaynta soohdinta Sudan ay la wadaagto dalka dariska ah ee koonfurta Sudan tan iyo markii koonfurta Sudan ay ka go’day 6 sanadood ka hor,taas oo dhererkeedu yahay 2175 km.
« Waxa maanta laga xusay Bosnia sanadguurihii 22aad ee guumaadkii loo gaystay 8372 Muslmiin ah	» Crackdown leaves Rohingya Muslims near starvation: UN